EMUI 10: Wararkii ugu horreeyay ee lakabka ayaa la xaqiijiyay | Androidsis
Dhowr maalmood ka hor EMUI 10 taariikhda xareynta ayaa la muujiyay, nooca cusub ee lakabka Customization-ka Huawei. Nooc cusub oo ku saleysnaan doona Android Q. Uma baahnin inaan sugno waqti dheer si aan u ogaanno qaar ka mid ah wararka aan ka filan karno qaybtan cusub ee lakabka. Marka waan heli karnaa fikrad.
EMUI 10 waxay noqon doontaa lakab sharad ku sii socda khadka kore, sida 9.1 oo la geeyay hadda loo diro taleefannada Huawei. Marka naqshadayntu ma keenayso isbeddello badan, laakiin heerka shaqooyinka waxaan ku arki karnaa sheeko-xiisayaal gaar ah oo xiisaynaya.
Waxaa jira dhowr dhinac oo aan ka filan karno EMUI 10. Dhinaca hal, guddi qaabeyn deg deg ah, halkaas oo aad si fudud ugu beddeli karto dhinacyada qaarkood. Intaas waxaa sii dheer, rukhsadaha barnaamijyada iyo adeegyada dib ayaa loo eegay sidoo kale. Soo bandhigida ama hagaajinta jawaabaha caqliga ayaa sidoo kale la xaqiijiyay.
Intaa waxaa dheer, waxay u muuqataa in Huawei ay ku guuleysatay inay ka hor marto Google hal dhinac. Maadaama aan filan karno telefoonno waxay yeelan doontaa tilmaam tilmaam buuxda, taas oo ah waxa Google isku dayey inuu ku gaaro Android in muddo ah. In kastoo aan lahaan doonno qaab mugdi ah nidaamka oo dhan. Waxaan sidoo kale wadaagi karnaa WiFi adoo adeegsanaya lambar QR ah.
Ugu dambeyntii, waan arki karnaa taas EMUI 10 ayaa nooga tagi doonta taxane war xiiso leh. Xaqiiqdii waxaa jiri doona isbeddelo badan oo dhankiina ah, si aan dhowaan u ogaan karno howlaha kale ee noosoo bandhigi doona lakabkan cusub. Maxay cadahay in meelaha qaar ay ka horeeyaan Google.
Ogosto 9 waa inay ugu dambayn rasmi rasmi ahaataa EMUI 10. Marka waxaan haysannaa afar toddobaad illaa aan ka ogaan doonno wax walba oo ku saabsan lakabkan nooca Shiinaha ah. Huawei waxaa macquul ah inuu inbadan noo sheego. Sidoo kale in la ogaado telefoonada marin u heli doona, kuwaas oo noqon doona kuwa cusbooneysiiya Android Q.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Huawei » La xaqiijiyay qaar ka mid ah astaamaha cusub ee EMUI 10
Huawei waxay diiwaangelisaa magac cusub oo loogu talagalay nidaamkeeda hawlgalka
Shaandheeyay sawir cusub oo ah Galaxy Watch Active 2